Aiza Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Aiza Andriamanitra?
Tafavoaka velona tamin'ny afon'ny Ady Revolisionera izy io ary nahita an'i New York niakatra ho tanàna lehibe indrindra eran-tany - fiangonana kely antsoina hoe St. Paul's Chapel. Any amin’ny faritra atsimon’i Manhattan no misy azy io, voahodidin’ny trano avo be. Fantatra amin'ny anarana hoe "The Little Chapel That Stood" [Eng. Ilay fiangonana kely nitazona]. Nahazo io anaram-bositra io satria rehefa nianjera ny Tilikambo Kambana tamin'ny Jan.1. Tsy simba ny Septambra 2001, na dia latsaky ny 100 metatra aza ny halavirana.
Avy hatrany taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny Jan.1. Ny septambra lasa teo dia ivon-toeram-piasana ho an’ny mpamonjy voina sy toerana hifandraisana amin’ireo havana mitady zavatra ny St. Paul’s. Nandritra ny herinandro maro, an'arivony ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny vondrom-pinoana samihafa no tonga teto amin'ity toerana ity, naniry mafy ny hanaiky ilay loza. Nitondra sakafo mafana sy nanampy tamin’ny fanadiovana ny mpiangona ao amin’ny fiangonana Md Paoly. Nanome fampiononana ho an’ireo namoy namana sy havana izy ireo.
Amin'ny fotoan'ny tahotra sy filàna lehibe dia azontsika atao ny mametraka ny fanontaniana hoe: "Aiza Andriamanitra?" Mihevitra aho fa afaka manome antsika marika ny fiangonana kely mba ho ampahany amin'ny valiny. Matoky izahay: na dia ao amin'ny lohasahan'ny fahafatesana aza, Andriamanitra dia momba antsika. I Kristy mihitsy aza no nametraka ny tenany teo amin'ny toerantsika, tonga iray amintsika, fahazavana izay manazava ny maizina isika. Niara-nijaly tamintsika Izy, tapaka ny fony rehefa vaky ny fontsika ary nahazo fampiononana sy fanasitranan'ny fanahiny isika. Na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza, momba antsika Andriamanitra ary miasa famonjena.
Ny fiangonana kely nijoro mafy dia hampahatsiahy antsika hatrany fa na dia amin’ny fotoan-tsarotra indrindra aza dia tena akaiky an’Andriamanitra – ao aminy no misy fanantenana, amin’ny alalan’i Kristy Tompontsika. Ny fiangonana manontolo dia fijoroana ho vavolombelona momba izany ary natao hampahatsiahivana antsika fa Andriamanitra dia tsy hamela na inona na inona hitranga eto amin’ity fiainana ity izay afa-tsy amin’ny famonjeny tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Tsaroantsika ireo namoy ny ainy1. Resy ny volana septambra. Mivavaka aho mba ho tonga saina isika rehetra fa ny Tompontsika dia niaraka tamin’izy ireo ary ho eo mandrakariva, anisan’izany isika.